Sausage Tree - Izihlahla - Iningizimu Afrika
Lesi sihlahla saseSub-Sahara Afrika sinezimbali ezinhle. Umbala wazo ubomvu njengegazi onoku-maroon futhi zihluma kuma-pinnacle amade. Iphunga lale mbali alikhomandi ebantwini kodwa liyaliheha ilulwane ekuthiwa yi- Dwarf Epauletted Fruitbat, ekuyi-pollinator yaso.
Uma lezi zimbali seziwile esihlahleni ziye zidliwe yizilwane ezifana nempala, i-duiker, izimfene, ama-bush pigs, nama-lovebirds. Izithelo ezingwevu zihluma ngaphakathi kwalezi zimbali. Lezi zithelo isisindo sazo ngu-4.5 wama khilogremu, futhi simiswe okwesosiji.
Lezi zimbali zaseNingizimu yase-Afrika ziye ziqhakaze ebusuku emagantshenni ongathi yizintambo. Umpe walezi zimbali upholinethwa amalulwane, izinambuzane, nama-sunbirds.
Izithelo esezivuthiwe zilenga kumagatsha esihlahla ngathi amasoseji amakhulu.
I-rind yezithelo isetshenziselwa ukuvutshelwa kweziphuzo zendawo. Ama-pods agcinwa njengezintelezi zenkolo futhi akhiqiza udayi obomvu uma ibilisiwe. Amafutha atholakala esithelweni asetshenziselwa ukulapha izimo zesikhumba. Ama-Meyer parrot ayazithanda kakhulu izimbewu zalesi sihlahla.
I-Mekoro yakhiwe ngeziqu nangezimpande ezinkulu ze-sausage tree. Lezi zikebhe zinezinkulungwane zeminyaka zisetshenziswa njengezokuthutha e-Okavango River Delta eBotswana. Le 'sausages' ayidliwa kodwa isikhumba siphelela emgqonyeni futhi sisetshenziswa njengomuthi.
Ukusetshenziswa kwalesi sihlahla okubaluleke kakhulu kungokwelashwa kwezifo zesikhumba ikakhulukazi umdlavuza wesikhumba. Isithelo sishiswa size sibe ngumlotha futhi siyahlutshwa nangamafutha namanzi ukuze kwenziwe unamathisela osetshenziswa esikhunjeni.
Isihlahla soMtholampilo sitholakala e-Sub Saharan Afrika eningizimu kuya enyakatho yeNingizimu Afrika.